Kuchengetedza kwezvakatipoteredza, mhando, kuyerwa uye zvinangwa | Green Renewables
Daniel Palomino | | General, Imba yeGreen, Environment
Apo patinotaridzira kuenderera kana kuenderera Mune ecology, isu tinotsanangura maitiro ehupenyu masystem "anotsigira" akasiyana, anotishandira isu se zviwanikwa, uye anobudirira nekufamba kwenguva.
Ndokunge, tiri kutaura nezvazvo kuenzanisa kwechisikigo ne zviwanikwa zve nharaunda. Zvinoenderana neshumo ya1987 yeBrundtland ichinongedzera isu pachedu sechisikwa, kuenderera kunoshanda kune kushandiswa kwesimba kubudikidza pazasi pekuvandudzwa muganho zvakasikwa nezvazvo.
1 Mhando dzekuchengetedza
1.1 Kusimudzira kwezvematongerwo enyika
1.2 Kuchengetedza hupfumi
1.3 Kuchengetedza kwezvakatipoteredza
2 Kuyera kwekuchengetedza kwezvakatipoteredza
2.3 Katatu mhedzisiro
3 Zvinangwa zvekuchengetedza kwezvakatipoteredza
3.1 Kugadzikana mumba mako
4 Hunhu hwemaguta akasimba
4.1 Kuvandudzwa kwemaguta uye kufamba masisitimu.
4.2 Nzwisisika manejimendi yedhara rakasimba, mvura uye hutsanana.
4.3 Kuchengetedzwa kwenharaunda yezvinhu.
4.4 Maitiro ekugadzirisa magetsi.
4.5 Residence hurongwa hwezvinokanganisa shanduko yemamiriro ekunze.
4.6 Akarongeka maakaunzi emari uye kukwana kwakabatana.
4.7 Yakanaka indekisi yekuchengetedzeka kwevagari.
4.8 Citizen kutora chikamu.
Sustainability inotsvaga yakajairwa yakanaka uye ndosaka iri mamiriro ezvehupfumi nehupfumi.
Izvo zvakati, isu tinogona kutaura kuti kune akati wandei marudzi ekusimudzira.
Kusimudzira kwezvematongerwo enyika
Dzosera zvakare iyo simba rezvematongerwo enyika nehupfumi, inovimbisa kuti kune mitemo isingachinji munyika, yekuti isu tine hurumende yakachengeteka uye tinogadza hwaro hwepamutemo hunovimbisa kuremekedzwa kwevanhu uye nharaunda.
Inokurudzira kubatana kubatana pakati penharaunda nematunhu nekudaro kuvandudza hupenyu hwehupenyu uye kudzikisira kutsamira munharaunda, nokudaro zvichigadzira zvimiro zveruzhinji.
Kana tichitaura nezve kugadzikana uku tinoreva kune kugona kuburitsa hupfumi muhuwandu hwakaenzana uye inokodzera nharaunda dzakasiyana dzemagariro, kumisikidza vanhu varege kuva zvachose inokwanisa uye inogadzirisa yavo yega matambudziko emari, iyo inogona pachezvayo kuwedzera kugadzirwa uye kusimbisa kushandiswa muzvikamu zvekugadzirwa kwemari.
Nechikonzero ichi, kana kuenderera kuri kuenzanisa, rudzi urwu rwekusimudzira ihuremu pakati pezvakasikwa nemunhu, chiyero chinotsvaga kugutsa zvido zvazvino pasina kupa zvibayiro kumarudzi anotevera.
Rudzi urwu rwekusimudzira ndirwo rwakanyanya kukosha (kudzidzwa munzvimbo dzatinodzidzisa) uye chinhu che "ongororo" muchinyorwa chino.
Icho hachireve kune chimwe chinhu zvakare kana chidiki pane icho kugona kuchengetedza zvehupenyu mukugadzirwa kwayo uye kusiyana kwenguva. Nenzira iyi, kuchengetedzwa kwezviwanikwa kunowanikwa.
Iyi kuenderera inokurudzira zvakatipoteredza kuziva mabasa uye zvinoita kuti budiriro yemunhu ikure nekutarisira nekuremekedza nharaunda yainogara.
Kuyera kwekuchengetedza kwezvakatipoteredza
Sustainability matanho ndeemamiriro ekunze kana mamwe marudzi, zviyero zveuwandu muzvikamu zvebudiriro kuti vakwanise kugadzira nzira dzekuchengetedza nharaunda.
Matanho matatu akanakisa nhasi ndeye Environmental Sustainability Index, iyo Environmental Performance Index uye mhedzisiro katatu.
Iyi indekisi ichangoburwa uye danho reVatungamiriri veGlobal veMangwana Mangwanani Echisimba Task Force yeWorld Economic Forum.
Iyo Environmental Sustainability Index kana Environmental Sustainability Index, muchidimbu iyo I I, chiratidzo chakanyorwa, chakamisikidzwa, icho chinosanganisira 67 variables yehuremu hwakaenzana huremu hwakazara (hwakamisikidzwa muzvikamu zvishanu, zvichizoumbwa nezvinhu makumi maviri nezviviri).
Nenzira iyi, iyo ESI inosanganisa makumi maviri nemaviri ekuratidzira kubva pahunhu hwemhepo, kudzikira kwemarara kusvika kudziviriro yenyika dzenyika dzese.
Mugiredhi inowanikwa nenyika imwe neimwe yakadamburwa kuita makumi matanhatu nenomwe nyaya dzakananga, senge kuyerwa kwesulfure dioxide mumhepo yemadhorobha uye kufa kunoenderana nehutsanana mamiriro.
Iyo ESI inoyera mashanu epakati mapoinzi:
Mamiriro ezvinhu ezvakatipoteredza enyika yega yega.
Kubudirira kunowanikwa mune basa rekudzikisa makuru matambudziko mune ezvakatipoteredza masisitimu.
Kufambira mberi mukuchengetedza vagari vayo kubva pakupedzisira kukuvara kwezvakatipoteredza.
Hunhu hwemagariro uye hwemasangano iro nyika yega yega inofanirwa kutora matanho ane chekuita nharaunda.
Chikamu chehutongi chine nyika yega yega.
Iyi indekisi seye meganumerary kuunganidzwa, inotarisira "kuyerwa" neGDP uye neInternational Competitiveness Index (ICI), kuitira kuzadzisa ruzivo rwakadzama, kutungamira zvirinani kutora sarudzo uye dhizaini nekumisikidza kwemitemo.
Mhando yezvakasiyana zvezvakatipoteredza zvinosanganisirwa zvakakwana zvakakwana (kuwanda uye kuburitswa kwezvinhu zvinosvibisa, mhando uye huwandu hwemvura, kushandiswa kwesimba uye kugona, nzvimbo dzakasarudzika dzemotokari, kushandiswa kwemaagrochemicals, kukura kwevanhu, kuona huwori, manejimendi manejimendi, nezvimwewo), kunyangwe vanyori vacho pachavo vachibvuma kuti kune akasiyana anonakidza akasiyana ayo asina ruzivo.
Ruzivo rwavakateura mhedzisiro yekutanga yeiyi indekisi inoratidzika kunge inoenderana neicho chinogona kucherechedzwa muchokwadi, kuva yakanakisa ESI kukosha nyika dzakaita seSweden, Canada, Denmark neNew Zealand.
Inozivikanwa nechidimbu PPE Environmental Performance Index inzira ye kuverenga uye kupatsanura kuverenga iyo kushanda kwezvakatipoteredza zvematongerwo enyika.
Misiyano inotorwa mukuverenga kweiyo EPI yakakamurwa kuita zvinangwa zviviri: hutano hwezvakatipoteredza uye hutano hwezvakatipoteredza.
Saizvozvowo, hutano hwezvakatipoteredza hwakakamurwa kuva mapato ezvematongerwo enyika, kunyanya matatu ari:
Migumisiro yemhando yemweya pane hutano.
Utsanana uye mvura yekunwa.
Iko kukanganisa kwenzvimbo pane hutano.
And the hutano hwezvakatipoteredza hwakakamurwa kuita mashanu mapato ezvematongerwo enyika zvakare ari:
Biodiversity uye pekugara.
Migumisiro yekusvibiswa kwemweya pane zvakasikwa.
Pamwe pamwe neese aya mapoka uye kuti vawane mhedzisiro yeiyo index, ivo vanoverengerwa 25 zviratidzo kune yako akakodzera ongororo (yakakwenenzverwa mumufananidzo pazasi)
Mutsara wepasi katatu kana wepasi katatu mutsara hausi chinhu chinopfuura a izwi rine chekuita nebhizinesi rinochengetedza, achireva mashandiro anokonzerwa nekambani yakaratidzirwa mumatanho matatu: magariro, hupfumi uye zvakatipoteredza.
Uchapupu hwekuita maringe ne katatu mhedzisiro Ivo vanoratidzwa mukusimudzira kana yemubatanidzwa yemagariro mutoro mishumo.
Uye zvakare, sangano rine kuita kwakanaka Mukutaura kwemari, mutsetse wepasi katatu waizove nemhedzisiro iyo kuwedzera yeupfumi hwayo kubatsirwa uye nemamiriro ekunze, pamwe neiyo kudzikisira kana kubvisa kwaro kwakashata kwekunze, kusimbisa iro rezvemagariro basa kusangano kune vane chekuita, uye kwete kwete chete kune vagovana.
Zvinangwa zvekuchengetedza kwezvakatipoteredza
Kuchengetedza kwakatarisana nematambudziko akakura munyika yanhasi uye chimwe chazvo kudiwa kwacho kubheja chaizvo na Simba rinowedzerwazve isu tinotsigira zvakadii mune ino blog.
Uye ndezvekuti kushandiswa kwesimba retsika kunofungidzira a kupfeka kwezvakatipoteredza izvo zvichakurumidza kugadziriswa.
Ndicho chikonzero ichi icho chinangwa chekutanga icho kugadzikana kunofanirwa kuzadzikiswa (uye ndinoreva icho chakajairika, kwete chete icho chakatipoteredza) chiri kukwanisa kugadzira hana yepasirese.
Tinofanira kunzwisisa kuti isu tiri mu nyika yakabatanaKuti zvatinoita zvinobata vamwe uye sarudzo dzakanaka kana dzakaipa zvinokanganisa vanakomana nevanasikana vedu munguva pfupi iri kutevera.
Zvishoma nezvishoma kuti kuziva kuri kuumbwa sezvo akawanda matanho akanaka kwazvo anoonekwa munyika dzakasiyana siyana kusimudzira kugadzikana kwakaringana.
Mhosva yepedyo ndeye yeprojekti Barcelona Smart Guta, iri muchikamu che Barcelona + inoenderera, yakagadzira mepu yekubatana uko zvese zvirongwa zveguta zvakarongeka. Chishandiso chinopfuura chekunakidza chekucherechedza matanho ese ari kuitwa.
Kugadzikana mumba mako
Panogona kuva nekusimba mumusha mako here?
Nhasi kune vakawanda vedu vanoronga kuve ne imba inochengetedzaIwo akakurisa sezvo achifunga nezvezvakasiyana zvinhu, senge maitiro ayo, simba raanoshandisa (kunyanya zuva), nzvimbo dzakavhurika dzinosanganisira uye nemidziyo yekudzivirira kuti isarasikirwa nesimba.
Zvese izvi zvekuvandudza zvinoita kuti ishandise magetsi uye isasvibisa zvishoma, uye ndizvo zvazviri kuenderera kunoshanda kuti iwe unogona kufunga kuita mukureba kwenguva kuti uzvipe iwe pachako kune hutano hwepasi.
Muchokwadi, iwe unogona kushanyira 2 zvinyorwa nezve bioclimatic akitekicha zvinonakidza kwazvo:
Simba rekuchengetedza mudzimba. Bioclimatic akitekicha.
Bioclimatic akitekicha. Muenzaniso neimba yangu.
Hunhu hwemaguta akasimba
Kugara mumusha wakachengetedzeka zvachose kune mubayiro, asi kana tichifunga padanho rakakura, ndeapi maitiro emaguta akasimba?
Maguta anonzi akasimba anofanirwa kuve neanotevera hunhu:
Kuvandudzwa kwemaguta uye kufamba masisitimu.
Nzvimbo dzeveruzhinji nenzvimbo dzegirini zvinoremekedzwa; kufamba hakutore nguva yakareba (kushivirira kusanganisa), uye mota nevanhu vanogara pamwe chete.
Kufambisa kweruzhinji kunoshanda, uye zvifambiso zvepachivande zvinoderedza kukura kwayo.
Nzwisisika manejimendi yedhara rakasimba, mvura uye hutsanana.
Tsvina yakasimba inounganidzwa, kupatsanurwa, kunyatso chengetwa uye kushandiswazve kuti ibudise kukosha kwayo kwakakura muzana.
Mvura yakasviba inorapwa uye inogadziriswazve kunzvimbo dzinowanikwa mvura, izvo zvinoderedza kudzikisira kwezvakatipoteredza.
Aya manyuko emvura (mahombekombe, madhamu, nzizi) anoremekedzwa uye ane huwandu hwakakwana hwehutsanana hwevanhu.
Urban nzizi dzinoshingairira kubatanidzwa muhupenyu hweguta.
Kuchengetedzwa kwenharaunda yezvinhu.
Iwo mahombekombe, nyanza nemakomo zvinodzivirirwa uye zvakabatanidzwa mukuvandudzwa kwemaguta kweguta, saka anogona kushandiswa kune hupenyu hweveruzhinji uye kugadzirwa kweguta.
Maitiro ekugadzirisa magetsi.
Aya maguta anoshandisa matekinoroji matsva kana maitiro ekuderedza kushandiswa kwemagetsi. Uye zvakare, ivo vanonongedzera iwe kukushandisa kwesimba rinowedzerwazve.
Residence hurongwa hwezvinokanganisa shanduko yemamiriro ekunze.
Nzvimbo dzisina njodzi dzinogarwa nevanhu kuti vagare dzakaderedzwa pane kuti dziwedzerwe, sezvo paine imwe nzira yekugara uye inogona kuitiswa.
Akarongeka maakaunzi emari uye kukwana kwakabatana.
Iko kune akajeka uye akajeka maakaundi, internet kupinda kuri kuwedzera, yekubatanidza kumhanya kwakaringana uye vanhu vari kutamira kune iyo digitization yeveruzhinji masevhisi.
Yakanaka indekisi yekuchengetedzeka kwevagari.
Vagari vanofunga kuti vanogona kugara pamwe murunyararo nekuti kuitika kwematsotsi uye mhosva dzakarongeka dziri kudzikira uye dzinodzikama pamwero wakaderera.
Citizen kutora chikamu.
Nharaunda inoshandisa zviwanikwa zvekutaurirana, senge mafoni ekushandisa, kukurukura maitiro ekugadzirisa matambudziko kugadzirisa guta.
Masangano akazvimirira pamwe nevamwe vese vatambi vemuno vakarongeka kuti vakwanise kuita chiitiko chezuva nezuva chehupenyu hweguta.
Ini ndinokusiya iwe nemufananidzo wekupedzisira paunogona kutarisa kuti ndedzipi maguta akasimba uye ndeei mashoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kuchengetedza kwezvakatipoteredza, mhando, kuyerwa uye zvinangwa
38 marezinesi matsva emapurazi emhepo muAlmería
Purazi rekutanga remhepo rinoyerera rave kutoenderera muNorth Sea